Raiso ny hafatra an-tserasera sy ny kaody SMS fanamarinana an-tserasera
Adikao ny iray amin'ireo laharan-tariby anananao ary ampiasao izany mba handraisana hafatra an-tserasera sy kaody fanamarinana amin'ny alàlan'ny SMS.
Jereo ny hafatra
Hanatsara ny tsiambaratelo amin'ny alàlan'ny nomeraon-telefaoninay. Afeno ny tenanao amin'ny Internet amin'ny alàlan'ny laharan-telefaoninay mba handraisana hafatra SMS sy kaody fanamarinana SMS, amin'ny Internet rehetra. Tsy ilaina ny fisoratana anarana. Ny serivisinay dia afaka tanteraka.
Ny nomeraon-telefaonay rehetra dia tena misy, karatra SIM vatana. Noho izany, azontsika antoka fa tonga hatrany amin'ny mpandray azy haingana ny hafatra ao anatin'ny segondra vitsy ary azo antoka.
Ny hafatra dia raisinay amin'ny Gateways SMS avo lenta. Tsy mametaka laharana an-telefaona amin'ny tranokala hafa izahay, ny laharan'ny telefaonay dia tany am-boalohany ary tafiditra amin'ny serivisinay manokana.
Miaraka amin'ny laharan-tariby anananao dia afaka mandray hafatra SMS amin'ny Internet ianao ary koa ireo kaody fanamarinana SMS avy amin'ny serivisy toa ny Facebook, Paypal, Twitter, Instagram ary ny hafa. Ampiasao amin-toky ny laharan-tariby ananantsika, tsy misy daty lany daty, ka ho eto izy ireo isaky ny mila azy ianao.